Homeसमाचारतीन बच्चाले गाएको नेपाली गीत इन्डियामा भाइरल भएपछी, अभिनेता अनुपमले स्टाटस नै लेखेर यस्तो भने
April 11, 2021 admin समाचार 5594
बलिउड अभि’नेता अनुपम खेर सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छन् । उनी आफ्नो फ्यान्स माझ चर्चा’मा रहिरहन पछिल्लो समय रोचक पोस्ट गरिरहन्छन्। अनुपमको बच्चाहरुसँग खास लगाव छ र उनी सामाजिक सञ्जालमा बच्चाहरु’सँग सम्बन्धित पोस्ट गरिरहन्छन्।
हालै उनले सड’कमा गीत गाइरहेका तीन बच्चाको अत्यन्तै क्युट भिडियो शेयर गरेका छन्। ती बच्चाको समूहलाई अनुपमले ‘बेस्ट म्युजिक ब्याण्ड’ बताएका छन् र आफ्नो तर्फ’बाट अवार्ड पनि दिएका छन् ।
यो भिडियो शेयर गरी अनुपम खेरले लेखे:का छन्-
सबै’भन्दा बेस्ट म्युजिकल ब्याण्ड !! म यिनलाई वर्ल्ड टूरमा लैजान चाहन्छु। मेरो विचारमा यी बच्चा’हरुले अस्पष्ट उच्चारणमा आशा र सधैँ एक राम्रो सम’यको सम्भावनाबारे गाइरहेका छन्। मलाई लाग्छ यो गीतको शब्दले दुनियाँ अहिले जुन कठिना’ईबाट गुज्रिरहेको छ त्यसबारे बताईरहेको छ । तर शायद हा:मी सबै ठिक हुनेछौँ।
सबैभ’न्दा उत्कृष्ट गीतको मज्जा लिनुहोस् । म यिनलाई ग्रामी अवार्डको लागि नोमिनेट गर्न चाहन्छु र यिन’लाई विजेता घोषित गर्छु । तपाई पनि सहमत हुनुहुन्छ नि ? इताजा खबरबाट
October 2, 2020 admin समाचार 12828
August 25, 2021 admin समाचार 3970
March 30, 2022 admin समाचार 1222